ONLF oo shaacisay shuruudaha ay ku xirtay inay Hubka dhigto
NAIROBI - Jabhadda xorreynta Ogaadeeniya ee ONLF ayaa fahfaahin dheeri ah waxay ka bixisay ciidamo boqolaal gaaraya oo ay ka dejisay magaalada Jigjiga ee xarunta dowladda degaanka, Arbacadii, halkaasi oo si wayn lagu soo dhaweeyay.
Cadaani Hirmooge, afhayeenka ONLF, ayaa sheegay in talaabadaan ay ka qeyb ka tahay fulinta heshiis nabada oo ay kala saxiixdeen dowlada Federaalka Itoobiya iyo jabhadda, kaasi oo lagu soo afjaro colaada muddo ka dhaxaysay.
Balse, wuxuu meesha ka saarey inay bedaleen mowqifkii ay hubka u qaateen, oo ay muddo ka badan 30-sano dagaalo uga wadeen gobolka, taasi oo ay ku dhinteen boqolaal askar oo labada garab ah.
Cadaani ayaa shaaciyay in ciidamadda haatan la dejiyay xero ku taala caasimada degaanka, isaga oo carabka ku dhuftay in loo sameeyo Guddiyo isku-dhaf ah oo dardargelin doona waxyaabaha aas-aasiga oo ay ubaahan yihiin.
“Guddiga ayaa isugu jira; Guddi ciidan, siyaasad iyo dhaqaale,” ayuu yiri Cadaani oo wareysi gaar ah siiyay idaacadda VOA-da laanteeda Afka Soomaaliga, isaga oo hoosta ka xariiqay inay howlaha sida ay ukala horeeyaan loo qabanayo.
Afhayeenka ayaa tibaaxay inay suuragal ay tahay in ciidamada loo furo tababar kale iyo waxbarasho madani ah, inkasta oo uusan soo hadal-qaadan hadii lagu buurinayo ciidamada degaanka ama kuwa Federaalka.
Madaxda ugu sareysa Jabhadda oo qaarkood ku sugan haatan gudaha degaanka iyo kuwa kale ayuu shaaca ka qaaday inay dhowaan dalka dib ugu soo laaban doonan, inkasta oo uusan soo bandhigin taariikhda rasmiga ah.
"Ciidamada dibadda ayay ka yimaadeen....Wayna kala garanayaan dalka..Saldhigyo guur-guura waan ku leenahay...Wayna la qabsan karaan...Guddiyadda ayaan ka shaqayn doona," ayuu Cadaani Hirmooge ku daray hadalkiisa.
- "Hubka ma dhigin, balse, waxaan aragnay Dimuqraadiyad" –
Hirmooge oo la su’aalay hadii askarta ay dib ugu celiyaan Jigjiga ay ka dhigan tahay inay Hubka dhigeen ayaa gaashaanka ku dhuftay, isaga oo carabka ku adkeeyay in taasi aanan qayb ka ahayn qodobada haatan miiska saaran.
Balse, afhayeenka ayaa qiray in mustaqbalka ay suurtagal tahay inay dhigaan Hubka, isaga geesta kale, ku dhawaaqay qodobadda ay shuruuda kaga dhigayaan inay Hub ka dhigis rasmi ah ah ay sameyso Jabhadda ONLF.
“Maya,” ayaa ku jawaabay markii la waydiiyay hadii talaabada ciidamada gaynta Jigjiga ay Hub ka dhigis tahay, isaga oo raaciyay: “Waa marka ay timaado dimuqraadiyad, ayna dadka Soomaali State ay aayahooda ka tashan karaan.
Xukuumadda ra’iisul wasaare Abiy Axmed, oo xafiiska yimid bishii April ee sanadkaan 2018, ayuu ku amaanay Hirmooge sida ay uga ogan tahay in degaanka uu noqdo meel ka caagan colaad, shacabkana helaan xuquuqdooda.
Ugu dambeyntii, Maamulka degaanka ee uu hogaamiyo Mustafa Cagjar ayuu si lamid ah farta ku goday inuu yahay mid aaminsan "sarreynta Soomaalinimadda, dimuqraadiyad iyo waliba inay shacabka awooda leeyihiin".